Nezvedu - Boselan Tank Company Limited
Kugadzwa kweShijiazhuang Zhaoyang Biogas Equipment Co, Ltd. muna Kubvumbi 2009, Yakagadzwa pa2017, Boselan Matangi CO., LTD.
Kambani yedu inhengo yeChina biogas nzanga, nhengo yeShanghai yekumaruwa indasitiri yesangano, uye nhengo yeHebei yekumaruwa simba mubatanidzwa. Iri bhizinesi remazuva ano iro rinotora iyo biogas michina indasitiri seyinotungamira indasitiri, inozvipira mukusimudzirwa kwesimba kuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza biogas zvigadzirwa, uye inotora kugadzira yepamusoro-soro uye inozivikanwa mhando senge yayo pachezvayo. Kambani yedu yakakura, yepakati uye diki methane injinjini inotsigira anaerobic tank system, gasi yekuchengetedza system, yekuchenesa system, gasi kufambisa system.
Chigadzirwa chekambani yangu yeiyo enamel yakaungana chirongo, biogas mbiri membrane gasi mubati sisitimu, padenga, padivi chisanganiso, methane kudzora inogara ichimanikidza gadziriro yekupa gasi system, biogas desulfurization tower, gasi dehydrator, firedamp murazvo wekusunga, biogas condenser, mutsvina, kuvandudza biogas slurry yakasimba mvura yekuparadzanisa, gasi torchi, biogas masara pombi, marashi gasi flowmeter, inochinjika gasi dziva haina kunaka kumanikidza mudziviriri, biogas slurry yekuvandudza system yefetiraiza, organic fetiraiza michina, zvimwe zvigadzirwa zvave nyika patent.
1. Kugadzira chikamu cheindasitiri zviyero, chinzvimbo chechitatu muindasitiri;
2. Mabhizimusi epamusoro-soro mudunhu rebei;
4. Test report yeiyo standard yehutsanana kuchengetedzeka kuongororwa kwemidziyo yemvura uye yekumwa yemidziyo uye zvekudzivirira zvinhu zveiyo enamel yakaungana matani;
5. AAA chikwereti chitupa;
6.AAA chitupa chekukudza zvibvumirano uye kuchengeta zvivimbiso;
7. Kuchengetedzwa kwekugadzirwa kwekumisikidzwa pamwero-3 bhizinesi (michina);
8. Kuzivikanwa kwenjodzi uye dambudziko rakavanzika kuongorora uye manejimendi.
Nei Uchisarudza BSL yakasungirirwa tangi?
BSL ndeimwe yevagadziri muChina vanotora chikamu mukugadzira iyo China Porcelain Enamel Zvigadzirwa Industrial Standard (CPEPIS). Chigadzirwa chayo chinoratidzwa kuChina Enamel Museum. Tekinoroji yeBSL Tank uye mhando inogara inogona kuvimbwa.
BSL inoomerera kushandisa Titanium chiwanikwa simbi ndiro seyakagadzirwa chigadziko, zvakapetwa kaviri porcelain enamel kupfeka, kupenya uye kusimba kupfuura yakajairwa inopisa yakapetwa nhema simbi coils uye zvirinani ngura kuramba kugutsa mutengi zvishuwo.
Chii chinonzi girazi chakabatanidzwa nesimbi yakakwenenzverwa Tank?
Girazi-rakaiswa-ku-simbi ndiyo tekinoroji yepamberi mumusika wetangi. Tekinoroji yematangi akavezwa akavakirwa pakakwirira kwesimba simbi yesimbi bhodhi sechinhu chepasi kunyangwe hunyanzvi hwekugadzira enameling, iyo yakasanganisa kuisa iyo enamel rukanda pamusoro penzvimbo yesimbi ndiro kuti iite yakajairwa enameled ndiro. Iyo tangi inogona kukurumidza kuunganidzwa nemutengo wakaderera mushure mekutakurirwa kwemidziyo kuri panzvimbo.
GFS Yakakwenenzverwa Tangi Kubatsira:
1.Zvishoma zvekuchengetedza zvinodiwa pamusoro petangi hupenyu nguva.
2.Girazi rakaumbwa rakasanganiswa kumativi ese esimbi machira
3.BSL yemukati yekunamatira yakagadzirirwa kudzivirira acids kubva kune yakaviriswa mafidha
4.Guaranteed Hwakanaka nefekitori yakashandiswa kupfeka munzvimbo inodzorwa.
5.Hard, yakasimba uye inogara kwenguva refu. Tangi rinoda HAPANA inofanirwa kudzoserwa.
6.Mitengo inoshanda dhizaini kune chero emuno kana epasi rose dhizaini makodhi.
7.Corrosion resistant tank uye dome iyo isingatombodi sandblasting kana kupenda = Hukuru Hupenyu Hwose Kukosha pane kongiri kana welded simbi matangi.
Ndeapi mabhenefiti nezvakanakira?
Hupenyu hwakareba (kusvika pamakore makumi matatu) Yakaderedzwa mashandiro ekushandisa
Modular yakakwenenzverwa tangi kuvaka Inokurumidza uye inodhura inoisa saiti kuisirwa - Kuderedza chirongwa timescales, mutengo uye chinodikanwa cheeseti michina
Kuchinja kweRe-modhi Matangi anogona kuwedzerwa, kubviswa uye kugadziriswazve kupa kwenguva yakareba kukosha kweaseti
Optimum ngura kuramba
YeGirazi-Yakabatanidzwa-ku-Simbi Kuchengetedza kwakachengeteka uye kwakachengeteka, paine mashoma mari yekuchengetedza
Pedzisa huwandu hwehupamhi uye kukwirira sarudzo nematanho ekuchengetedza mhinduro Yakawanda inodhura mhinduro yekugadzirisa zvinodiwa nevatengi